Migriricerca II: Fieri waxay bixisaa deeq tababar oo loogu talagalay dhalinyarada asalkoodu soogalootiga ah | JumaMap
Deeqda waxbarahso Migriricerca II ee ay xayeysisay FIERI (Madasha Cilmi-baarista Caalamiga ah iyo Yurub ee Socdaalka) waa online, kaas oo u dammaanad qaadaya dhalinyarada asalkooda la xiriira socdaalka Socdaal deeq tababar ah oo ay ku sameeyaan cilmi-baaris bulsho. Hadda daabacaadda labaad ee sanadkan, wicitaanku wuxuu ku tiirsan yahay taageerada Haayadda San Paolo Foundation wuxuuna ka soo jeedaa malo: iyada oo u taagan socdaalka cilmiga bulshada shay aad u xiiso badan, cilmi baarista ku saabsan dhacdooyinka socdaalka iyo hababka ka mid noqoshada iyo ka saarida bulshada ee la xidhiidha iyaga waxaa si buuxda u soo saaray cilmi-baarayaal u dhashay, iyada oo aan lahayn shakhsi iyo / ama qoys khibrad socdaalka. Xaaladdani waxay sidoo kale saamaysaa macnaha guud ee Talyaaniga, halkaas oo, in kasta oo socdaalka uu ahaa qayb muhiim ah oo ka mid ah tirakoobka qaranka muddo tobanaan sano ah, muhaajiriinta da’da yar ama kuwa asalkoodu yahay soo-galootiga ayaa ah kuwo aan matalaysnayn xagga xirfadaha dhaqanka iyo, gaar ahaan, adduunka tacliinta. Balaadhinta matalaadan ma aha oo kaliya su’aasha caddaaladda bulshada, laakiin sidoo kale tayada cilmi-baarista.
Waxaa jira wakhti ilaa 30ka Juun 2022 lagu codsado ka qaybgalka mashruuca.
• ku dhashay dibadda iyo soo-galootiga Talyaaniga ama asal soo haajiray
• da’da ka yar 30 (aan weli la dhamaystirin wakhtiga soo gudbinta codsiga) ama ka yar 32 (aan weli la dhamaystirin waqtiga soo gudbinta codsiga haddii musharraxa uu haysto PhD)
• Ku dhameystay (Talyaaniga ama dibadda) takhasus ama shahaadada mastarka ama dhakhtarka cilmi-baarista mid ka mid ah maadooyinka soo socda: qaybaha waxbarashada 11 – Taariikhda, falsafada, cilmiga barbaarinta iyo cilmi nafsiga; qaybaha waxbarashada 12 – Cilmiga Sharciga; qaybaha waxbarashada 13 – Cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka; qaybaha waxbarashada 14 – Siyaasadda iyo cilmiga bulshada.
Macluumaadka deeqda waxbarasho
Hawlaha lagu taageeray deeqda waxbarasho waxay bilaaban doonaan 1 Sebtember 2022 waxayna dhammaan doontaa 31 Ogosto 2023. Qadarka deeqda waxbarasho, oo lagu bixin doono heshiis iskaashi oo joogto ah, wuxuu noqon doonaa € 16,800,oo lagu bixin doono habka 12 biloodlaha ah .
Waa kan dukumeentiga la doonayo in la gudbiyo :
• Curriculum Vitae oo la cusboonaysiiyay; •Warqad caddeyneysa in uu daneynayo oo uu xiiseenayo cosadaha ka qabgalka mashruuca iyo sooyaalkoodii socdaalka; • Mashruuc cilmi-baadhiseed oo la doorbidayo mid khuseeya mid ka mid ah goobaha cilmi-baarista FIERI, oo kala ah:
o Socodka socdaalka, dhaq-dhaqaaqa EU-da iyo wadaninimada
Socod isku dhafan, magangalyo iyo ilaalin caalami ah (https://www.fieri.it/mixed-flows-asylum-and-international-protection/)
Is-dhexgalka: xaaladaha, xidhiidhada iyo fikradaha (https://www.fieri.it/integration-conditions-relations-and-perceptions/)
Shaqada, ganacsiga iyo xawaaladaha (https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-remittances/)
Siyaasadaha is-dhexgalka iyo daryeelka (https://www.fieri.it/integration-and-welfare-policies/)
Cunsuriyad, takoorid iyo kala duwanaansho;
Sheekooyinka iyo isbeddellada xidhiidhka dadweynaha ee socdaalka
Hal-abuurka iyo wax-soo-saarka farshaxanka ee socdaalka iyo/ama maadooyinka leh asal guuritaanka
Si kastaba ha ahaatee, mawduucyadan mawduucyada ah looma tixgelinayo inay khasab tahay: Guddigu sidoo kale wuxuu qiimeyn doonaa soo jeedinta mashruuca ee ku wajahan mawduucyo kala duwan, ilaa iyo inta ay ku xiran yihiin dhacdooyinka socdaalka. Mashruucu waa inuu lahaadaa dherer tilmaame ah oo gaaraya 12,000 xaraf (oo ay ku jiraan boosas), kaasoo qeexaya dulucda uu musharraxa doonayo inuu wax ka qabto, habka shaqo ee uu doonayo inuu qaato iyo nooca badeecada uu doonayo inuu ka soo saaro cilmi-baarista.
Codsiyada waa in si gaar ah loogu soo diraa si elektaroonig ah ciwaanka iimaylka fieri@fieri.it marka la gaaro 30ka Juunyo 2022 (mawduuca: MIGRICERCA II). Codsiyada imanaya ka dib wakhtiga kama dambaysta ah lama aqbali doono. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kala soco bando ufficiale Migriricerca II.
Wixii faahfaahin ah kala xidhiidh Yaasiin Dia (fieri@fieri.it, 011-5160044).
PrevPrecedenteUjeedada macluumaadka loogu qoray luqado badan waa ka-hortagga si aan sharci daro ah loogu shaqeysan dadka goobaha shaqada
SuccessivoSPID: maxaa loogu talagalay, cidda codsan karta iyo sidaNext
51 Visite totali, 12 visite odierne
340 Visite totali, 11 visite odierne
382 Visite totali, 12 visite odierne